गीतकार रोहन पौडेल “जनक” युरोपको रमणीय समुन्द्री तटमा
फागुन १७ काठमाडौ, गीतकार रोहन पौडेल”जनक”आफ्नो पहिलो गीति एल्बम लिएर बजारमा आउने भएका छन् । नेपाली सुगम संगीतमा निक्कै नै मार्मिक र कर्णप्रिय गीतहरुको शब्द रचना गर्ने गीतकार रोहन पौडेल समाजसेवी तथा ब्याबसायी पनि हुन् ।
उनि जति मिठा शब्द रचना गर्छन् त्यो भन्दा धेरै आफ्नो ब्यापार ब्याबसायामा पनि सफल छन् । गीतकार तथा ब्याबसायी “रोहन पौडेल जनक” को पहिलो एल्बमको लागि तिन वटा गीतहरु रेकर्ड भईसकेको छ ।
एल्बममा रहने “कुनै दिन कुनै पल, तिमी छैनौ म देखि टाढा” बोलको गीतमा हरि लम्सालले संगीत गरेका छन् । गायक अजर जंगमको स्वर रहेको उक्त गीतलाई हरि लम्सालले नै एरेन्ज पनि गरेका छन् ।
एल्बममा रहने अर्को गीत “तिमीलाई आफ्नो बनाउ कसरि ? तिमीलाई मनमा सजाउ कसरि“? बोलको गीत गायक रुपकुमार राईको आवाजमा रहेको छ । यो गीतलाई ताराप्रकाश लिम्बुले संगीत भरेका हुन् भने, साहास शाक्यले एरेन्ज गरेका छन् ।
यसैगरी,एल्बममा रहने अर्को गीत “जिन्दगीको दुई पल, बिताउछु तिम्रो साथमा” बोलको गीतमा मेलिना राई र सन्तोष लामाको स्वर रहेको छ । यो गीतलाई हरि लम्सालले संगीत गरेका छन् भने, रिकेश गुरुङ्गले एरेञ्ज गरेका छन् ।
अहिले केहि गीतको म्युजिक भिडियो छायांकन पोखरा जस्तो रमणीय स्थानहरुमा भईरहेको र चाडै नै बजारमा आउने गीतकार रोहन पौडेल”जनक”ले सूचना खबरलाई जानकारी दिएका छन् ।
Tags: rohan poudel, रोहन पौडेल
काठमाडौको बालाजुमा बसको ठक्कर बाट एक महिलाको मृत्यु